Nnụnụ ọhịa ọhịa Amazon | Njem zuru oke
Ruo ọtụtụ iri afọ ornithologists na ndị hụrụ ihe okike si n'akụkụ ụwa niile agawo South America iji hụ ọgaranya na agba nke ọtụtụ ụdị nnụnụ na oke ọhịa Amazon.
Nke a abụghị ọzụzụ n'efu: dịka mbido 1970, Switzerland-American ornithologist Rodolphe Meyer nke Schauensee ejiri obi ike na oru ya "Ntuziaka nye nnụnụ nke South America" ​​(A ndu ka nnụnụ nke South America) na e nweghị mpaghara ụwa nwere ọtụtụ ụdị nnụnụ dịka na Amazon.
Ma otu osila dị, iwepụta ndepụta aha nnụnụ niile bi n'akụkụ a nke ụwa bụ ọrụ dị mgbagwoju anya. A na-eme atụmatụ na mpaghara ahụ dum (nke gụnyere ọtụtụ Brazil, Venezuela, Colombia, Peru na steeti ndị ọzọ), ngụkọta ọnụ ọgụgụ ga-gburugburu 1.300 umu. N'ime ndị a, ihe dị ka ọkara ga-abụ ogba aghara.
Iji mezuo nkwubi okwu a, ewerela onu ogugu onu ogugu banyere oke ohia nke ohia Amazon nke ndi otu di iche iche lebara anya. Offọdụ n'ime ụdị ndị a ka a hụrụ naanị na mpaghara ụfọdụ nke mpaghara, ebe ndị ọzọ na-ekesa ma ọ bụ na-erughị otu ụdị na Amazon.
Nke a bụ ihe atụ nke nnụnnụ ndị nnọchi anya kachasị ama ọhịa Amazon:
1 Ndị n'ike
2 Umu nnụnụ na obere nnụnụ
3 Gallinaceae na mallards
4 Parrots na Macaws
5 Nnụnụ ndị na-eri anụ
Mpaghara Amazon bu ulo di iche-iche nke ndi n'ike ndi ozo di iche na uwa. Ihe kacha mara amara bụ Ugo bere (Nkechi harpia), nke a na-eyi egwu ugbu a na mkpochapụ. Otú ọ dị, a ka nwere ike ịchọta ya na Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Peru, Suriname, French Guyana, ndịda ọwụwa anyanwụ Brazil, na ugwu Argentina.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita abụọ nke nku nku, ọ bụ otu n’ime ugo kasịnụ n’ụwa. Agba ntụ ya nke na-acha ntụ ntụ, nke na-acha ọcha na nke ojii bụ, ya na ọkpụkpọ ya pụrụ iche, ihe e ji mara ya.
Birdsdị nnụnụ ndị ọzọ a na-erikarị n'ógbè a bụ egbe cryptic (Micrastur akwụkwọ nri) ife ikwusi ikwiikwii (Pulstrix nwere ike).
Umu nnụnụ na obere nnụnụ
Nnukwu nnụnụ kachasị elu na oke ohia Amazon bụ obere obere nnụnụ, na-abụ abụ ma ọ bụ na ọ bụghị. N'ime ha enwere ụfọdụ ndị nnọchite anya dị ka hummingbird nke topaz (Topaza nara), na ọdụ ogologo ya na ngwa ngwa. Nnụnụ a mara mma na-acha uhie uhie ma jiri ezigbo ọnụ ya na-aakụ ifuru site na ifuru. A na-ekesa ya na mpaghara niile.
Topaz hummingbird chọrọ
Enwere ọtụtụ obere nnụnụ na Amazon, nnukwu katalọgụ. Iji dee otu n'ime ndị kasị mma mara, anyị ga-banyere acha uhie uhie nuthatch (Dendrocolaptes picummus), nke bụ ụdị osisi ohia. Pụrụ iche aha maka a ọkara-sized, ma ukwu osisi na-ewu ewu na nnụnụ: na toucan (Ramphastos na-egwu egwu), a maara nke ọma site na nnukwu onu okuko ya.
Gallinaceae na mallards
E nwere ọtụtụ nnụnụ ndị ọzọ n'oké ọhịa Amazon nke ga-eju anyị anya. Umu anumanu nke gallinaceae nwere ụkwụ siri ike, anụ ọhịa dị mkpụmkpụ, ma ha enweghị ike ofufe ma ọ bụ nwee ike ịnwe ụgbọ elu dị mkpụmkpụ na obere ala.
A Atiya guzo apụ kama (Anhima cornuta), ụdị nnụnụ toro toro nke ọma site na obere mpe mpe nke na-apụta n'elu onu ya.
Na mpaghara nwere ọtụtụ osimiri, ọwa mmiri na ọdọ mmiri dị ka Amazon, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịchọta ọtụtụ nnụnụ nke ezinụlọ ọbọgwụ, nke ahụ bụ, ọbọgwụ na ihe yiri ya. Na Orinoco ọgazị ma ọ bụ ọbọgwụ wigeon Ha bu umu anumanu abuo, na echefughi peccary, ọbọgwụ ọhịa nke nwere oke mara mma.
Parrots na Macaws
Dị nnụnụ a doro anya bụ nke mbụ na-abata n'uche mgbe anyị chere echiche banyere anụmanụ nke Amazon. E nwere ọtụtụ ụdị macaws, nke nha dịgasị iche na nke anụ ahụ. Na hyacinth macaw (Anoorhynchus Hyacinthinus), nke a makwaara dị ka macaw blue, bụ ma eleghị anya ndị kasị ewu ewu. O nwere ihe na-acha odo odo, nke na-acha anụnụ anụnụ, nke nwere ábụ́bà ọlaedo n’agba. O di nwute, o bu oke ihe ojoo.
Speciesdị ọzọ dị ịtụnanya bụ acha nku-ume nku (Ihe chloroptera), nke a pụrụ ịchọta n'akụkụ dị iche iche nke mpaghara Amazon. Anumanu ndia di iche site na ike nke onu ha, ọgụgụ isi ha na ogologo oge ha, ebe ha nwere ike idi ndu iri afo isii ma obu karie.
Nnụnụ ndị na-eri anụ
Birddị nnụnnụ Carrion, nke na-eri nri foduru anụmanụ ndị ọzọ nwụrụ anwụ. I nwekwara ike ịchọta ụdị nnụnụ a n'oké ọhịa Amazon. N’etiti ha, enwere otu nke putara ihe karie ndi ozo: the eze udele (Papa nna Sarcoramphus). Ọ bụghị anụmanụ na-adọrọ adọrọ karịsịa n'ihi agba nwere agba na ọhụụ na-emebi ihu ya.
Otú ọ dị, ọ ga-ghọtara na, dị ka ya Andean ikwu na KọnduọnO nwere ikuku na-eme ka ọ maa mma. Dabere n’ógbè Amazon nke o bi na ya, nnụnụ a na-enweta aha dị iche iche, dị ka olulu oke ọhịa o eze zamuro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nnụnụ na Amazon Rainforest